यी अंगहरूलाई बारम्बार छुँदा हुन्छ स्वास्थ्यलाई हानि, तपाईमा यस्तो बानी त छैन ? - Birgunj Sanjalयी अंगहरूलाई बारम्बार छुँदा हुन्छ स्वास्थ्यलाई हानि, तपाईमा यस्तो बानी त छैन ? - Birgunj Sanjalयी अंगहरूलाई बारम्बार छुँदा हुन्छ स्वास्थ्यलाई हानि, तपाईमा यस्तो बानी त छैन ? - Birgunj Sanjal
६ श्रावण २०७८, बुधबार ०२:५१
वीरगन्ज । हामीहरू स्वस्थ रहनका लागि हरसम्भव कोशिश गरिरहेका हुन्छौं । तैपनि नजानिकनै हामीहरू गल्ती गरिरहेका हुन्छौं जसले पछि गम्भीर परिणाम निकाल्छन् ।केही मानिसलाई शरीरका अंग बारम्बार छुने फोहोरी बानी लागेको हुन्छ । यो बानीले स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ । तपाईंमा पनि यस्तो बानी छ भने सुधार्नुस् ।